Ny Colossus an'ny Apennines any Florence, Italia | Famoronana an-tserasera
Ny sary vongana lehibe any Florence izay manafina efitrano samihafa
Ity iray ity sary mihetsika epic an'ny colossusLehilahy antsasaky ny antsasaky ny tendrombohitra dia natsangana tamin'ny faramparan'ny taona 1500 ilay mpanao sary sokitra teratany Giambologna ho mariky ny Tendrombohitra Apennine any Italia.
Ilay andriamanitra tendrombohitra, antsoina hoe Apennines, dia tonga ao amin'ny 10 metatra ny haavony ambonin`ny Vila de Pratolino any Tuscany. Ity sarivongana goavambe ity dia manafina tsiambaratelo mahafinaritra ao anatiny miaraka amina andiana efitrano maromaro misy fiasa samihafa izay namela ity colossus ity hanangana ity toerana manokana ity.
Mihazona ny tanany havia ilay goavambe loharano avy amin'ny riaka ambanin'ny tany. Misaotra maodely iray ahafahantsika mahafantatra ireo efitrano ao anatiny akaiky, ankoatr'ireo andiana sary nalaina teo.
Ity dia ao amin'ny Pratolino Park, iray iray amin'ireo tsara tarehy indrindra ao amin'ny faritra manodidina an'i Florence. Na dia rava aza ny ankamaroan'ny tanàna sy ny valan-javaboary, miaraka amin'ireo tsangambato mbola mijanona, dia azon'ny olona an-tsaina ny hatsarana sy ny majika izay tokony ho tamin'ny androny.
Ny Colossus an'ny Apennines dia noforonina tamin'ny vato sy tanimanga ary izy io dia nisy fresko maromaro nandravaka ireo efitrano tao anatiny.
Zaridainan'olon-tsotra handehanana hahita ilay sary sokitra izay atolotra ny mpandalon ny tanjaky ny paozy rehetra ary ny fomba fitazonana azy io loharano voajanahary toy ny hoe miaro azy amin'ny fomba sasany. Sary sokitra iray manontolo misy refy lehibe izay misy ao amin'ireo toeram-pialan-tsasatra misy tranga maromaro izay mbola maharitra amin'ny fotoana, na dia efa ela aza no namoronana ny mpanakanto italiana Giambologna.
Raha tsara vintana ianao mandalo ilay faritra, ny valan-javaboary misokatra ny zoma, asabotsy ary alahady hatramin'ny faran'ity volana ity. Hafa iray hafa tokoa amin'ireo nasehonay anao tamin'ny herinandro lasa miaraka amin'i Mueck.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny sary vongana lehibe any Florence izay manafina efitrano samihafa
Azucena Ramos dia hoy izy:
Kanto. Mendri-piderana ny fanomezana nomen'Andriamanitra ny olona. Mahatalanjona.
Valiny tamin'i Azucena Ramos
Ampidiro fitaovana maimaim-poana hananganana ny mailakao